Filozofia momba ny fahasalamana ara-pananahana Ny valin'ny Fanamarinana
Home Momba anay Ny Filozofia momba ny fahasalamana ara-pananahana
Our philosophy on fahasalamana ara-nofo dia ny fanaovana ny fikarohana farany momba izay manampy sy manakana ny fahasalamana ara-nofo ho azon'ny mpanatrika marobe hahafahan'ny tsirairay manatsara ny fiainam-pitiavany. Miorina amin'ny famaritan'ny World Health Organisation ny fahasalamana ara-nofo:
"... fehezin'ny toe-tsaina ara-batana, ara-pihetsehampo, ara-tsaina sy sosialy mifandraika amin'ny firaisana ara-nofo; Tsy ny tsy fisian'ny aretina, ny tsy fahombiazana na ny aretina. Ny fahasalamana ara-pananahana dia mitaky fomba fijery tsara sy manaja ny firaisana ara-nofo sy ny fifandraisana ara-piraisana, ary koa ny fahafahana manana traikefa ara-nofo mahasalama sy azo antoka, tsy misy faneriterena, fanavakavahana ary herisetra. Ho an'ny fahasalamana ara-pahasalamana azo atomboka sy voatazona, ny zo ara-panambadiana ataon'ny olona rehetra dia tokony hohajaina sy hiarovana ary ho tanteraka. " (WHO, 2006a)
Ny rafitry ny valisoa ao amin'ny ati-doha dia nivoatra hitondra antsika amin'ny valisoa voajanahary toy ny sakafo, ny fatorana ary ny firaisana ara-nofo mba hampiroborobo ny fahavelomantsika. Androany, ny teknolojia dia namokatra kinova 'supernormal' amin'ireo valisoa voajanahary amin'ny endrika sakafo tsy fanao, media sosialy ary sary vetaveta amin'ny Internet. Ny atidohantsika dia tsy nivoatra hiatrehana ny fanamafisana aterak'izany. Ny fiarahamonina dia miaina areti-mandringana amin'ny fikorontanana amin'ny fitondran-tena sy ny fiankinan-doha mandrahona ny fahasalamantsika, ny fivoarantsika ary ny fahasambarantsika.
Orinasa internet an'arivony tapitrisa dolara, indrindra ny indostrian'ny pôrnôgrafia, dia mampiasa "teknika famolavolana fandresen-dahatra" novolavolaina tao amin'ny oniversite Stanford 20 taona lasa izay. Ireo teknika ireo, natsangana ho fampiharana sy tranokala, dia natao manokana hanovana ny fisainantsika sy ny fitondrantenantsika. Ny fampiharana toa Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, ary tranokala toy ny Pornhub, YouTube sns dia samy mampiasa azy rehetra. Izy ireo dia mifototra amin'ny fikarohana siantifika, psikolojia ary siansa sosialy be pitsiny indrindra mba hikendrena ireo faniriantsika tsy mahatsiaro tena ary handrisika ny filana tsy mahatsiaro tena ao amin'ny rafitry ny valisoa ao amin'ny ati-doha ho bebe kokoa. Izany no antony ampianarin'ny The Reward Foundation ny olona momba ny rafitry ny valisoa ao amin'ny ati-doha. Amin'izany no ahafantaran'ny mpampiasa ny fiaviany sy ny tanjon'izy ireo hiadiana amin'ny toetra mampiankin-doha an'ireo vokatra ireo.
Ny fihanaky ny firaisana ara-nofo matetika dia avy amin'ny zavatra 2: ny atidoha iray izay simba noho ny fientanam-po sy ny adin-tsaina, ary amin'ny tsy firaharahiana ny mahasamihafa. Ny dindon'ny fanandevozana dia misy fiantraikany amin'ny rafitry ny atidoha, ny asany ary ny fanapahan-kevitra. Izany indrindra indrindra amin'ny ankizy sy ny tanora eo am-piandohan'ny dian'izy ireo mankany amin'ny fahamatorana ara-nofo. Io no sehatra raha izy ireo no atahorana indrindra amin'ny mety hisian'ny olana ara-pahasalamana sy ny fiankinan-doha.
Akaiky ny fanantenana. Ny foto-kevitry ny 'neuroplasticity', ny fahaizan'ny ati-doha mifanaraka amin'ny tontolo iainana, dia midika fa afaka manasitrana ny ati-doha ny atidoha rehefa manala stresseur iray isika. Manome fampahalalana momba ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, fanatrarana, heloka bevava ary fifandraisana izahay ary koa fampahalalana momba ny fananganana faharetana amin'ny adin-tsaina sy fiankinan-doha miaraka amin'ny tatitra momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fialana amin'ny pôrnôgrafia. Tsy ilaina ny fahalalana siansa mialoha.
Roa ambin'ny folo taona lasa izay taorian'ny nahatongavan'ny broadband, na ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha, nanomboka nifandray tamin'ny mpiara-miasa amintsika amerikana Gary Wilson nitady fanampiana. Nandray anjara tamin'ny tranonkala iray izy izay nanazava ny siansa ao ambadiky ny firaisana sy ny fiankinan-doha. Ireo mpitsidika, maro amin'izy ireo no nandray an-tanana ny Aterineto broadband, nitatitra ny fomba nanombohan'izy ireo tsy voafehy intsony ny fijerena sary vetaveta amin'ny Internet na dia tsy misy olana toy izany aza amin'ny DVD na magazine erotika. Nisy fiatraikany ratsy teo amin'ny fifandraisan'izy ireo, ny asany ary ny fahasalamany izany. Hafa noho izany ny pôrnôgrafia 'Internet' Playboy sy ny toy izany.
Rehefa avy nanadihady bebe kokoa izy dia nanangana tranokala vaovao www.yourbrainonporn.com i Gary, hanomezana alalana ny porofo ara-tsiansa manazava ity fivoarana vaovao ity sy ireo tantara avy amin'ireo olona nanandrana ny hiala amin'ny pôrnôgrafia. Ny lahateny fampahafantarana sy mampihomehy nataony tamin'ny hetsika Glasgow TEDx voalohany indrindra "The Great Porn Experiment"Dia efa nahitana sarimihetsika 13.7 an-tapitrisany tao amin'ny YouTube ary nadika tamin'ny fomba maro, ho amin'ny tenim-pirenena 18. Hatramin'izao, 54 fikarohana momba ny neurological dia nanamafy ny zavatra hitan'i Gary tany am-boalohany. Ny resaka TEDx dia nanampy olona an'arivony maro hanaiky fa ny olana ara-pahasalamany ara-tsaina sy ara-batana ary ny fahadisoam-panantenan'izy ireo dia mety misy ifandraisany amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Mankasitraka ihany koa ireo mpampiasa noho ny loharanom-pahalalana maimaimpoana an-tserasera voalaza etsy ambony noho ny fanampiana azo sy ny anarana tsy fantatra anarana nomena. Ny olona sasany dia mila ny serivisin'ny mpitsabo amin'ny fahasalamana ho fanarenana ny fahasalamana ara-nofo sy ny fahasalamana.
Tianay ho anisan'ny vahaolana ihany koa amin'ity olan'ny fiaraha-monina misongadina ity. Ho fanatanterahana izany, nanangana fikambanana mpanao asa soa The Reward Foundation izahay tamin'ny taona 2014. Miaraka amin'ny fikarohana ataontsika manokana sy ny fitaovam-pampianarana midadasika, antenaina fa hampianatra ny besinimaro amin'ny ankapobeny ary koa ireo matihanina momba ny fiantraikan'ny streaming mivantana, sary vetaveta amin'ny Internet azo jerena amin'ny paompy 24 iray andro. Ny tanjona dia ny tsy handrarana ny pôrnôgrafia fa ny hampahafantatra ny olona ny zava-misy mba hahafahan'izy ireo misafidy 'fantany' momba ny fampiasany sy ny toerana ahazoana fanampiana raha ilaina izany. Ireo mpanao politika, ray aman-dreny, mpampianatra ary matihanina hafa mifampiraharaha amin'ny tanora dia manana andraikitra manokana hianatra ny vokany.
Tranonkala maimaim-poana, lahatsoratra vaovao sy fanavaozam-baovao ao amin'ny Twitter
Drafitra fampianarana maimaimpoana ho an'ny sekoly
Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny maimaim-poana amin'ny Internet Internet
Atrikasa fanofanana ho an'ny matihanina eken'ny Royal College of General Practitioners
Fanentanana ho an'ny lahy sy vavy ao amin'ny sekoly
Fanentanana ho an'ny governemanta manerantany hamokatra lalàna fanamarinana taona ho an'ny pôrnôgrafia
Ny asantsika rehetra dia mifototra amin'ny fivoaran-draharaha farany ao amin'ny onjam-pahalalàna sy ny fikarohana ara-tsosialy. Ambonin'ny zava-drehetra dia mikasa ny hampihatra izany amin'ny fampiharana, mahafinaritra ny mianatra sy ny fitaomam-panahy avy amin'ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny klinika sy mpampianatra manerana izao tontolo izao.
TSY MISY OLONA TSY MISY MITOVY isika fa manao mpanome tolotra mailaka an-tserasera.